Mar labaad sanad-dugsiyeedka, waxaa jira odhaah ah "Iskuul, waxaa jira Yong fiican" ~ arday walba wuxuu leeyahay riyooyin u gaar ah, arday walba wuxuu leeyahay wax ka badan ama ka yar waqtigiisa ardaygu wuu ka buuxay xusuus. , Waxaan tilmaamnay buuraha, waan u waxyooday qoraalka, ama ku raaxee dhalinyarada, dhidid, aad u faraxsan.
Waxqabadka qaaliga ah waa qaanuunka maalmaha ardayda, maanta waxaan kuu qaataa inaad kuxisaabto waxoogaa yar oo ah waxqabadka sare “baaskiil arday”.
[S160, hormoonno laxiriira]
Midab qurux badan oo isu eg, qaab firfircoon, fuushan waxaad tahay cufnaanta ugu quruxda badan xerada
[S210: adduunka oo maskaxda lagu hayo, inaan guri ku riyoodo]
Waxa loogu yeero akhriso toban kun oo buugaag ah, socdaal toban kun oo mayl ah. Wadnaha yar yari had iyo jeer waa xasilloon yahay, adduunkuna waa qurux badan yahay, marka qalbigu masaafada u jiro!
S201, aluminium aluminiin ah oo kuu keenaya khibrad fuushan raaxaysan.Young + nalka baabuur = ka guuleysiga adduunka! Waxaa sidoo kale jira ikhtiyaarro 24 ′ iyo 26 to oo ah xulashada ugu horreysa ee dhallinyarada baaskiil wadista ah!
[S310, jidkaaga horumarka)
Labada qaab ee kor ku xusan miyay ku farxeen? Weligaa haku fikirin, kaalay oo arag S310!
S310 waxay isku dhafisay faa'iidooyinka labada gawaarida kor ku xusan, labadaba dhalinyaro qurux badan, iyo aluminium khafiifa.Oh, iyo waxqabadka wanaagsan
Shimano taxane ah oo ah 500 oo ah qalabka xawaaraha doorsoomada leh durbaanka ubaxa kaarka, meelaynta saxda ah, xawaaraha dheecaanka ah ee dheecaanka badan, ha kugu raaxeysto fuulista!
[Amiir yar oo xasilloon S610]
Haddii aad kaydsan tahay oo aadan rabin inaad wax sheegto, ka dib S610 waa tigidhkaaga. Nafsadee, S610 waa "dhamaadka sare, heer sare ah, raaxo hooseeya oo macno leh" waddo la wareejiyay.
Kalsooni la'aan “laba erey ayaa u furan inay arkaan, caruur baa leh, miro ayaa jira iyo qaraha, waxaa jira xayawaan digaag, waxaa jira cayayaan duulaya. Qof walboo aamusan, wadnuhu wuxuu leeyahay awood aan xad lahayn, diyaar u ah S610 wuu kugu raaci karaa inaad si xasilan u korto.
[S620: doorashada ugu dambeysa ee qiimaha-ku-fadhida]
Ugu dambeyntiina, allabarigii alaabooyinka gurigayaga: S620! Dahab midab adag, muuji dhadhankaaga aan caadiga ahayn; Qeybta waxqabadka ayaa adduunka ka dhigaysa meel hoosaysa.
24 xawaaraha shimano suud, aluminium aluminium disc brake ah, ayaa xiri kara fargeeto, dabeysha durdurinta ubaxa bailin, ha lagaa dhigo inaad hogaamiye noqoto.
Ugu dambeyntiina, mar labaad, waxaan kuu rajeynayaa riyo faraska, meel walbana waa ku dhici kartaa!
Balance Bike , Biin Bike Ka socda Shiinaha , Baaskiil Mountain Bike , Fatxi Mountain Bike , Birta kulul ee Birta , Mountain Bike ,